आज २५६४ औँ बुद्धजयन्ती , यस्ता छन भगवान बुद्धका अनमाेल वचन जसले शाेच्ने शैली बदल्छ ! « Bagmati Online
आज २५६४ औँ बुद्धजयन्ती , यस्ता छन भगवान बुद्धका अनमाेल वचन जसले शाेच्ने शैली बदल्छ !
हामी जहाँ जन्मियौं, त्यो गौतम बुद्धको जन्मभूमी पनि हो भनेर गर्व गर्छौं । अहिले पनि हामी ‘गौतम बुद्ध जन्मिएको देश’ भनेर सगर्व नेपालको चिनारी दिन्छौ । यद्यपी गौतम बुद्ध किन विश्वमा कहलिए ? उनले चराचर जगतका लागि के गरे ? उनीबाट मानव जीवनका के कुरा सिक्न सकिन्छ ? उनी ईसा पूर्व ५६३ पहिले कपिलवस्तुमा जन्मिएका थिए, राजा शुद्धोधन र मायादेवीको कोखबाट । अतः यहाँ गौतम बुद्धको केही अनमोल वचन प्रस्तुत गरिएको छ, जसले तपाईंको सोंच बदल्न सक्छ ।